Baolina kitra - "Orange Pro League" :: Mikatona mandritra ny fotoana tsy voafetra ny kianjan’i Vontovorona • AoRaha
Baolina kitra – « Orange Pro League » Mikatona mandritra ny fotoana tsy voafetra ny kianjan’i Vontovorona
Niampy iray indray ny kianja tsy afaka hampian­trano ny fiadiana ny ho tompondakan’ i Madagasikara taranja baolina kitra, Diviziona elita, na ny «Orange Pro League». Taorian’ ny fikatonan’ny kianjaben’i Mahamasina dia tsy azo ampiasaina mandritra ny fotoana tsy voafetra ihany koa ny kianjan’i Vontovorona.
«Ampiasain’ny fanjakana malagasy handraisana ireo olona arahi-maso akaiky, ka atoka-monina, no antony tsy hahafahana mampiasa ny kianjan’ny Cnaps », hoy Rakotoharimalala Mirado, sekretera jeneralin’ny fikambanan’ireo klioba elita eto Madagasikara (CFEM), teny amin’ny foiben’ny orinasan-tserasera Orange Madagascar, Ankorondrano, omaly.
Kianja telo izany no tsy afaka hampiantrano ny andro faha-16 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madaga­sikara satria ankoatra an’ i Mahamasina sy Vontovo­rona dia misy asa fanamboarana ihany koa ny kianjan’i Bari­kadimy Toamasina, amin’ny faran’ny herinandro izao. Voatery hatao any amin’ny kianjan’i Maromamy, Brickaville, ny lalaon’ny Tia Kitra FC sy ny FCA Ilakaka, izay saika hatao any amin’ny kianjan’i Barikadimy. Afindra eny amin’ny kianjan’i Carion,
Antananarivo, kosa ireo lalao tokony hotanterahina eny amin’ny kianjan’i Vonto­vorona, amin’ny faran’ny herinandro izao. Isan’ireny ny lalao hifanandrinan’ny Cnaps Sport Itasy sy ny 3FB Toliara, hotontosaina amin’ny sabotsy 21 marsa izao amin’ny 12 ora. Toy izany ihany koa ireo lalao hihaonan’ny AS Adema sy ny AS Jet Mada, hatao amin’ny alahady 22 marsa 2020 amin’ny 12 ora. « Vahaolana vonjimaika ihany aloha ny hamindrana ireo lalao eny Carion fa anjaran’ny klioba indray no mamaritra ny kianja amin’ny tohin’ny fifani­nanana. Amin’ny volana avrily, rahateo, vao hiverina an-kianja indray izy ireo », hoy hatrany Rakotoharima­lala Mirado.
Sazy ara-ketra :: Hatao lavanty ihany ny entan-dry Razaimamonjy Claudine
Fisorohana valanaretina :: Foana ny « Star Tour » any Antsirabe amin’ny Paska